सुदुपश्चिम | दर्पण दैनिक
धनगढीमा १०३२९ मत गन्दा कसकाे मत कति ?
२०७९ जेष्ठ २ गते ०३:५२
कैलाली । सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा अहिलेसम्म १० हजार ३२९ गणना भएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले ४ हजार ५३८ मत पाएका छन् । यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेदवार नृपबहादुर वडले २ हजार ४२८, नेकपा एमालेका रणबहादुर चन्दले ११४० मत पाएका छन् । मेयर पदमा खसेकामध्ये हालसम्म २ हजार ७९ मत बदर भएका छन् । हमाल र वडबीच २११० मतको अन्तर रहेको छ।
सुदूरपश्चिमका १९ पालिकाकाे अन्तिम मतपरिणाम, कसले कहाँ जिते ?
२०७९ जेष्ठ २ गते ०३:२५
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म १९ वटाको मतगणना सम्पन्न भएको छ । कम मतदाता रहेका १९ वटा पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको हो । १९ मध्ये ७ स्थानीय तहमा नेकपा एमाले, ७ स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस र ५ स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रका मेयर र अध्यक्ष विजयी भएका छन् ।नेकपा एमाले विजयी भएका पालिकाहरू१) बझाङको साइपाल गाउँपालिका– मानबहादुर बोहोरा विजयी२) बझाङको थलारा गाउँपालिका– प्रकाश रोकाया विजयी३) दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका– नरसिंह चैसिर ४) बैतडीको पन्चेश्वर गाउँपालिका– गोरखबहादुर चन्द५) दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका– विजयसिंह धामी६) डोटीको जोयारल गाउँपालिका– दुर्गादत्त ओझा७) कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका– निर्मल राना
बीना मगरको क्षेत्रमा ३ वडासहित पालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्षमा एमाले विजयी
२०७९ जेष्ठ २ गते ०८:३९
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री बीना मगरको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) विजयी भएको छ । अध्यक्षमा एमालेका निर्मल राना ४ हजार ५६१ र उपाध्यक्षमा सपना चौधरी ३ हजार ५६१ मत सहित विजयी भएकी छन् ।
दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरमा एमाले विजयी
२०७९ जेष्ठ २ गते ०८:२२
काठमाडौं । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा नेकपा (एमाले) विजयी भएको छ । शैल्यशिखरको मेयरमा एमालेका विजय सिंह धामी र उपमेयरमा पनि एमालेकै शान्ति खडायत निर्वाचित भएका हुन् ।
धनगढीमा ७४७० मत गणना गर्दा : कसको कति ?
धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले सुरुवाती अग्रता बढाउँदै लगेका छन्। अहिलेसम्म धनगढीमा ७ हजार ४७० गणना भएको छ । जसमा हमालले ३ हजार ३२९ मत पाएका छन् ।
दार्चुलाको नौगाढमा एमालेका प्रेमसिंह धामी पराजित, माओवादीले जित्याे
२०७९ जेष्ठ १ गते ०६:२८
दार्चुला । दार्चुलाको नौगाढ गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । अध्यक्ष उम्मेदवार दलजित धामी विजयी भएका हुन् । दलजितले नेकपा एमालेका उम्मेदवार प्रेमसिंह धामीलाई पाँच सय छ भोट अन्तरले हराएका हुन् । दलजितले ३ हजार ७ सय ८३ भोट ल्याउँदा प्रेमसिंहले ३ हजार २ सय ७७ भोट ल्याएका हुन् ।
दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा एमाले विजयी
२०७९ जेष्ठ १ गते ०६:१०
काठमाडौं । दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिकामा एमाले विजयी भएको छ । यस गाउँपालिकाको मेयर पदमा एमालेका नरसिंह चौसिर ५०१३ मतसहित निर्वाचित भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका हंशराज भट्टले ३८८७ मत ल्याएका छन् ।
बाजुराको स्वामीकार्तिक ३ मा समाजवादीलाई पछि पार्दै एमाले विजयी
२०७९ जेष्ठ १ गते ०३:०५
मार्तडी । बाजुराको स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाको वडा नम्वर ३ को वडाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । नेकपा एमालेका उम्मेदवार प्रेमबहादुर कटेल ४७७ मत ल्याउँदै वडाध्यक्षमा विजयी भए । उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एकीकृत समाजवादीका कुवेरबहादुर सिंहले ३६८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरमा ३१५३ मत गन्दा, कसकाे कति ?
२०७९ जेष्ठ १ गते १२:२८
धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले ५०० मत सहित अग्रता कायम गरेका छन्। हालसम्म गणना भएको ३१ सय ५३ मतमा हमालले १४ सय ७२, नेपाली कांग्रेसका नृप बहादुर वडले ७६३ मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेका उम्मेदवार रणबहादुर चन्दले १५४ मत प्राप्त गरेका छन् । यता उपमेयरमा माओवादी केन्द्रकी शान्ति अधिकारीले ७३८ मत प्राप्त गरेकी छन् । एमालेकी कन्दकला रानाले ४११ मत प्राप्त गरेकी छन् ।